Ukurhweba nge-IAI yaBasaqalayo: Fumana elona Qonga liBalaseleyo lokurhweba nge-AI ngoJanuwari 2022
Ukurhweba nge-AI kwabaQalayo: Fumana elona Qonga liBalaseleyo lokurhweba nge-AI 2021
Fumana ezona ziqonga zibalaseleyo zokurhweba nge-AI zabaqalayo, Qala ngemali encinci njenge- $ 250 kwaye uvumele urhwebo lobukrelekrele bokuzenzela, funda ingxelo yethu ye2021.
Ukuhlaziywa: 22 January 2021
Sijoyine kwaye uqalise ukuba sisityebi ngeMediaRave!
Xa abazalwana ababini behlanganisene, kwaye omnye uthanda ubuchule kunye neenkcukacha-manani ngelixa elinye lingumrhwebi oqeqeshiweyo kwi-Intanethi, ufumana umxube osemgangathweni. Sobabini sikonwabele ukurhweba kwi-Intanethi, kodwa yayingumnqweno wam. Ndifuna indlela ebhetele kwaye elula yokwenza urhwebo, ke saphela sakha iMediaRave.
Ukhuselekile kwaye uyimfihlo
Ubukrelekrele bokwenziwa (AI) yitekhnoloji evelayo engekafiki kumandla ayo apheleleyo. Ngapha koko, amathuba okufezekiswa yi-AI ngenye imini awanakuphela. Ngale nto ithethwayo, i-AI isadlala indima enkulu kumashishini aphambili.
Nokuba u-Facebook ucebisa umxholo ohambelana nomsebenzi wakho wembali okanye iAmazon ekhuthaza iimveliso ezisekwe kwintengo yangaphambili-i-AI inesakhono sokugqitha kwengqondo yomntu ngomgama othile.
Ngale nto ithethwayo, ukwahluka kwe-AI kukwasetyenzisiwe kwiimarike zezemali kufutshane-kumashumi amathathu eminyaka. Iibhanki ezinkulu kunye namanye amaziko ezezimali axhomekeke kwezi algorithms ukugqwesa kwiimarike ngokungaguquguqukiyo. Kananjalo, yayingumcimbi wexesha ngaphambi kokuba imeko yorhwebo ye-AI ifikelele kwindawo yokuthengisa.
Ukuba unomdla wokufunda i-ins kunye nokuphuma kwento urhwebo lwe-AI olukuyo, ukuba lusebenza njani, kwaye ngawaphi amaqonga akuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iiasethi ngendlela ezimeleyo-qiniseka ukuba usifunda isikhokelo sethu Ukurhweba nge-AI kwabaQalayo.
Qaphela: Isoftware ye-AI yokurhweba ilungile kuphela njenge-algorithm engaphantsi. Ngamanye amagama, ukuba isoftware iyilelwe kakubi, unokugqibela ulahlekelwe yimali.
Yintoni ukurhweba nge-AI?
Igama elithi 'Ukurhweba nge-AI' ngandlela ithile ibanzi, hayi ubuncinci kuba inokugubungela imiba emininzi yorhwebo oluzenzekelayo. Kwindlela yayo esisiseko, urhwebo lwe-AI lubhekisa kukuthengwa nokuthengiswa kweeasethi ngaphandle konxibelelwano lomntu. Endaweni yoko, isoftware esisiseko iya kuthengisa egameni lakho-ngokusekwe kwimeko ebimiselwe ukuyilandela.
Kwabo abangaziyo, umxholo ogqithileyo we-AI kukuba unamandla okuhlalutya izigidi zezinto ezinokubakho kumzuzwana wokwahlulahlula. Ikwenza oko ngokuvavanya iziqwengana zeedatha zembali, kwaye emva koko ithathe isigqibo ngokusekwe kulwazi olunayo.
Nangona amaziko amakhulu ezemali efikelela kwezinye iirobhothi eziphambili ze-AI zokurhweba, zigcina isoftware engaphantsi igadwe kakhulu ngalo lonke ixesha. Oku kuthintela 'isosi yabo eyimfihlo' ekubeni ingene ezandleni ezingalunganga. Kananjalo, abathengisi banokuthengisa okuncinci ukufikelela kwinqanaba elifanayo le-AI yorhwebo lobuchwephesha njengabalingani babo beziko.
Ngale nto ithethiweyo, kukho inani lamaqonga akwi-Intanethi akuvumela ukuba urhwebe ngendlela ezenzekelayo. Ngelixa ingahambanga phambili njenge-AI bots ebanjwe ngamaziko emali, oku kwenza ubuncinci ukuvumela ukuba urhwebe ngokuzenzekelayo-ngaphandle kwemfuneko yokuthenga nokuthengisa iiasethi ngokusisiseko.
Zithini i-Pros kunye ne-Cons ye-AI yokuRhweba?
I-AI inesakhono sokugqwesa ubuchopho bomntu
Akukho kuthembela kwiimvakalelo zomntu okanye kwiimvakalelo zesisu
Urhwebo 24/7 -I-AI ayikhe ihlangane nokudinwa
Amandla okuthengisa iimarike ezininzi ngaxeshanye
Urhwebo ngokusisigxina ngendlela ezimeleyo
Isoftware yokurhweba nge-AI ilungile kuphela njenge-algorithm engaphantsi
Inxalenye yemisebenzi yesandla efunekayo ukuseta iiparameter zakho zorhwebo
Isebenza njani i-AI yokuRhweba?
Ke ngoku ekubeni unaso isishwankathelo sento ye-AI yokuthengisa, makhe sihlolisise ukuba le nto isebenza njani. Ngamafutshane, urhwebo lwe-AI lujolise kwi-algorithm echazwe kwangaphambili enesikhundla sokubeka urhwebo ngendlela ezimeleyo- ngezigqibo ezisekwe kwidatha yezembali. Njengoko siphawulile ngokufutshane kwicandelo elingentla, amaziko emali anezona bots ze-AI zorhwebo zihambele phambili kolu shishino kwaye ngenxa yoko-zingaphaya kweemarike.
Nangona kunjalo, kwindawo yokuthengisa yentengiso, awuyi kuba nakho ukufikelela kwirobhothi njengobuchule njengoko inkundla yeziko inayo. Endaweni yoko, uya kuthenga i-algorithm esekwe kurhwebo eyenzelwe omnye umntu. Isoftware esisiseko iya kuyilwa ngesiseko 'sokuba-ukuba', nto leyo ethetha ukuba itekhnoloji iya kwenza urhwebo xa iimeko ezithile zidibene.
Makhe sijonge umzekelo okhawulezayo wokucoca inkungu.
Umzekelo woRhwebo lwe-AI
Masithi uthenga irobhothi ye-AI egxile kwi Ukurhweba kwangaphambili. Isoftware icwangciselwe ukubeka i-oda yokuthenga kwisibini esiphambili se-forex xa inqanaba leFibonacci Retracement libetha i-61.8%.
Apha ngezantsi sidwelise ezinye zeenkqubo 'zokwenza ntoni ukuba irobhothi ye-AI ingathatha.
I-GBP / i-USD ibetha inqanaba lokuFakwa kwakhona kweFibonacci lama-61.8%.
Oku kuthetha ukuba iirobhothi ye-AI 'ukuba-kuthekani ukuba imeko idibene.
Kananjalo, i-bot ibeka i-oda yokuthenga kwi-GBP / USD.
I-bot ikwafaka okunye ukulahleka kokuyeka kunye nokuthatha inzuzo.
I-bot iyalelwa ukuba ivale urhwebo ukuba IGBP / USD inyuka ngama-45 iipipi.
Kukwacetyiswa ukuba kuvalwe urhwebo ukuba i-GBP / USD iyancipha nge-10 pips.
Iiyure ezi-2 emva kokubeka urhwebo, i-GBP / i-USD inyuka ngeepips ezingama-45, ke urhwebo luvaliwe.
Njengoko ubona kulo mzekelo ungentla, i-AI yokuthengisa i-bot yakwazi ukubeka iiodolo ngaphandle kokuba ufuna ukwenza nawuphi na umsebenzi onzima. Ngapha koko, yayingezizo nje iimfumba zokuskena kweedatha zembali kwi-GBP / USD, kodwa yayikulungele 'ukubuyisa' zonke iimali ezinkulu. Kananjalo, lo mzekelo ubonakalisa indlela enokuba nakho ngayo i-bot ecwangciswe kakuhle ukuba yenzelwe ngokuchanekileyo.
Zithini izibonelelo zoRhwebo lwe-AI?
Ke ngoku ekubeni uqonda ngokuqinisekileyo ukuba yintoni urhwebo lwe-AI kunye nokuba isoftware engaphantsi kwayo inokusebenza njani, makhe sijonge eminye yemizekelo ebalaseleyo ethi izipho ze-AI zorhwebo.
Uhlalutyo lweDatha olungenamda
Esinye sezibonelelo ezibalaseleyo zokusebenzisa irobhothi yokurhweba nge-AI kukukwazi ukwenza inani elingenamda lophando lwedatha. Ukuba ungumrhwebi onamava, uya kwazi isandla sakho ukuba kubaluleke kangakanani uhlalutyo lobuchwephesha kwimeko ye yorhwebo ntengiso. Ngaphandle kwayo, ngekhe uxhobe ngezixhobo ezifunekayo zokubeka imisebenzi enempumelelo ngokuthe rhoqo.
Umzekelo, masithi ungumrhwebi onomdla wentengiso. Oku kunokubandakanya nantoni na evela kwigolide, isilivere, iplatinam, ioyile, igesi yendalo, ingqolowa, nokunye okuninzi. Enyanisweni, kuya kuba nzima ukuchitha ixesha elifunekayo ukuhlalutya idatha yembali zonke kwezi zinto sele zikhankanyiwe. Ngokuchasene noko, abathengisi abanamava baya kuthi gqi phantsi kwimpahla enye.
Kwelinye icala, oku kuyanceda njengoko kukuvumela ukuba ufumane ubungcali kudidi oluthile lweeasethi, kunokuba uzame ukuba 'nguJack Wayo Yonke Imisebenzi'. Nangona kunjalo, oku kukwathetha ukuba unokuphoswa ziimfumba zamathuba anokubakho okuthengisa.
Ngale nto ithethwayo, inkqubo ye-AI yesoftware ecwangciswe kakuhle inesakhono sokwenza uphando oluphambili lobuchwephesha kwiiklasi ezininzi zeeasethi njengoko unqwenela. Kananjalo, i-bot ikwenzela wonke umsebenzi onzima, ekuvumela ukuba uthathe izintso emva kokuba uneenkcukacha eziyimfuneko phambi kwakho!
🥇 Ungaze uyeke ukuRhweba
Nokuba ungumrhwebi we-newbie okanye umtyali mali onamava onamava aphantsi kwebhanti lakho - likho ixesha elininzi onokuthi ulinikele kwimisebenzi yakho yorhwebo. Ayisiyi kuphela le nto ibandakanya inqanaba lokuqokelelwa kwedatha, kodwa eyona nkqubo yokubeka amashishini, nayo. Abo bazama ukutshisa iinjin baya kuthi ekugqibeleni bafumanise ukuba urhwebo lubekwa ngendlela engenangqondo.
Oku kwahlukile kubalawuli bezithuthi zomoya ekufuneka bekhefu emva kweyure nganye yokuthunyelwa, hayi ubuncinci kuba indima ifuna ukuzinikela kwengqondo kunye nomzimba ogqithisileyo. Ngale nto ithethiweyo, ukusebenzisa inkqubo ye-AI yokuthengisa kuyakuvumela ukuba urhwebe iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki. Ngobunzima, inokwenza oko ngaphandle kokuhlangabezana nesoyikiso sokwenene sokudinwa kunye nokungabi nangqondo.
🥇 Urhwebo ngayo nayiphi na indawo yentengiso
Ngokufana nokuthengisa ukudinwa, uya kuba namandla okuthengisa kuphela inani elithile leemarike ngalo naliphi na ixesha. Umzekelo, ngekhe ukwazi ukurhweba zombini iTokyo Stock Exchange kwaye i-NASDAQ, hayi ubuncinci ngenxa yeyantlukwano yexesha leeyure ezili-14.
Kukwayimeko yokurhweba ngeLondon Stock Exchange kunye noTshintshiselwano ngoKhuseleko lwaseAustralia. Kananjalo, kuya kufuneka uthengise iindawo zentengiso ezibonisa ixesha lendawo yakho.
Nangona kunjalo, ngokusebenzisa amandla erobhothi yokurhweba nge-AI, unokufikelela kwiimarike ezininzi njengoko unqwenela-iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki!
Ukuphela koRhwebo lweemvakalelo
Esinye sezizathu eziphambili zokuba kufutshane ne-75% yabo bonke abathengisi abakwi-Intanethi baphulukana nemali ekuhambeni kwexesha kungenxa yokuba abantu abanakho ukujongana neziphumo zeemvakalelo zokunyuka nokuhla. Ngamanye amagama, xa urhwebo olucingisisiweyo luhamba ngendlela engeyiyo, abathengisi be-newbie bayasokola ukwamkela ukuba le yinxalenye nje yentengiso. Ukuphendula, uya kuhlala ufumana abathengisi abangenamava bebeka urhwebo olungenangqondo ngembono "yokuphumelela oko bakuphulukileyo". Oku ekugqibeleni kubangela ukuhla kwezinto ezithi zibone umrhwebi ephulukana nebhanki yakhe yonke.
Kwakhona, iirobhothi zorhwebo lwe-AI azithintelwanga yi-rollercoaster yeemarike zezemali, ubuncinci kuba isoftware esekwe isekwe kwiimeko ezichazwe kwangaphambili. Isoftware ye-AI iya kubeka kuphela ukuthengisa kunye nokuthengisa iiodolo ngokusekwe kwezi meko, ke ayinamandla okwenza into ngaphandle kwezi paramitha. Kananjalo, ngu ukusebenzisa Irobhothi yokurhweba nge-AI unokunciphisa esinye sezona zisongelo zinkulu kwibhanki yakho yexesha elide- iimvakalelo!
Ukugqibelela kwabaQalayo kunye nabaRhwebi abaPhambili
I-bots zokurhweba nge-AI zilungele abathengisi abatsha kunye nabatyali mali abanamava. Ngokumalunga neyokuqala, isoftware engaphantsi ikuvumela ukuba ufikelele kwiimarike zezemali ngaphandle kokufuna amava angaphambili. Endaweni yoko, uya kugunyazisa i-bot yakho yorhwebo ye-AI ukuba ithenge kwaye ithengise iiasethi ngendlela ezimeleyo.
Xa kuziwa kubatyali mali abanamava, iinkqubo zokurhweba ze-AI zikuvumela ukuba uthathe inzame zakho zokurhweba kwi-Intanethi ukuya kwinqanaba elilandelayo. Uyakwazi ukuhlalutya iseti yedatha enkudlwana, uthengise iiyure ezininzi njengoko ubona kufanelekile, kunye nokufikelela kwinani elingenamda kwiindawo zentengiso.
Zithini iingozi zorhwebo lwe-AI?
Ngelixa izibonelelo esizibonisileyo kwicandelo elingentla zisenza iirobhothi zibe nomtsalane, kuya kufuneka ujonge ubungozi. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba urhwebo lwe-AI lwalulula, ngaba asizukuyenza yonke le nto ukuqinisekisa inzuzo engenasiphelo? Ngelishwa, urhwebo lwe-AI ayisiyiyo into eyi-100% yobungqina bobudenge, ke qiniseka ukuphonononga le mngcipheko ulandelayo.
Good Ilungile kuphela njengeSoftware eSisiseko
Njengoko siqaphele kwisikhokelo sethu ukuza kuthi ga ngoku, iirobhothi zilungile kuphela njengesoftware esisiseko. Ungalibali, umntu kufuneka ayile ngesandla, akhe kwaye aqeqeshe isoftware ukuba ayenze kwindawo yentengiso evulekileyo.
Kananjalo, ukuba i-bot yokuthengisa ye-AI ayenzelwanga kakuhle, kusenokwenzeka ukuba isoftware iyakuphulukana nemali.
Ababoneleli ngeShady AI yoRhwebo
Ukuba kuGoogle igama elithi 'Elona qonga liphezulu lokurhweba nge-AI ", uya kuziswa ngamawaka ababoneleli abathembisa ngenzuzo oqinisekileyo ngayo. Ngapha koko, aba banikezeli be-AI baya kwenza amabango e-hyperbole angaphaya kweyona nyaniso. Kananjalo, kuya kufuneka unyathele ngononophelo olukhulu ngaphambi kokuba wahlukane nemali yakho.
Ngokubalulekileyo, kuya kufuneka uzibuze ukuba kutheni umniki-nkonzo we-AI eza kwabelana 'ngeSosi eyimfihlo' kuluntu ngokubanzi ukuba ngaba isoftware isisiseko ibinenzuzo kangaka?
Iimpawu zeMarket zinokutshintsha nangaliphi na ixesha elinikiweyo
Ukuba unethamsanqa elaneleyo lokuthenga i-bot yokuthengisa ye-AI ephumeleleyo ekwenzele inzuzo engaguquguqukiyo kwiinyanga eziphelileyo, akukho siqinisekiso sokuba oku kuya rhoqo kunjalo. Ngokuchasene noko, ukwenziwa kweemarike zezemali kunokutshintsha nangaliphi na ixesha.
Kungenxa yoko le nto kufuneka uhlengahlengise kwaye wenze izilungiso kwirobhothi yakho ye-AI yokuthengisa rhoqo ukuze uqiniseke ukuba isicwangciso sayo sisasebenza. Ngale ndlela, urhwebo lwe-AI ayisiyi-100% yokuzimela, njengoko kusafuneka unikele ixesha elithile kulondolozo oluqhubekayo.
Ndiyikhetha njani i-AI yokuRhweba iBot?
Ke ngoku ukuba uyazazi izibonelelo kunye nomngcipheko wokusebenzisa i-AI yorhwebo bot, ngoku siza kuphonononga ukuba ungamfumana njani umboneleli ukuze ahlangabezane neemfuno zakho zotyalo mali. Ekugqibeleni, akukho zimbini iinkqubo zokurhweba nge-AI ezifanayo, ke kuya kufuneka uchithe ixesha ucinga ngento ojonge ukuyiphumeza.
Okokuqala nokuphambili, kuya kufuneka uvavanye ukuba lingakanani igalelo oya kuthi ufune ukuzibophelela kulo ekusebenzeni kwe-AI yorhwebo lwakho. Kwelinye icala, ezinye ii-algorithms zesoftware zenziwe kwangaphambili, oko kuthetha ukuba kufuneka usebenze iirobhothi kwaye iya kuqala ukurhweba. Kwakhona, kuya kufuneka uzibuze ukuba ngaba umphuhlisi angazikhupha na izicwangciso zabo eziyimpumelelo ukuba benza iingeniso ezingaguquguqukiyo.
Kwelinye icala lesiphelo, unokucelwa ukuba usete ezakho iimeko zokurhweba ukuze zilandelwe yirobhothi ye-AI. Nangona oku kuyakudinga into yokwazi kwindawo yokurhweba kwi-Intanethi- njengokuqonda izikhombisi zobuchwephesha kunye neempawu, ngekhe ufune naliphi na ulwazi lokufaka iikhowudi. Ngokuchasene noko, uninzi lwababoneleli nge-AI bezorhwebo babonelela ngenkqubo yoyilo lokutsala kunye nokuwisa.
✔️ Isebenza phi iSoftware yakho yokuRhweba nge-AI?
Ngoku kuya kufuneka ujonge apho iarobhothi yakho yokurhweba nge-AI inokusebenza khona, hayi ubuncinci kuba usaya kufuna umthengisi wesithathu ukufikelela kwiimarike zemali. Kwilizwe elifanelekileyo, iirobhothi zokurhweba nge-AI ziya kuhambelana zombini iMetaTrader 4 (MT4) kunye neMetaTrader 5 (MT5).
Kungenxa yokuba amakhulu wabarhwebi abakwi-Intanethi abaxhasayo baxhasa la maqonga orhwebo, oko kuthetha ukuba ialgorithm yakho yeAI inokufikelela ngokungagungqiyo kwindawo yentengiso oyithandayo.
Iiklasi zeeasethi ezixhaswayo
Ngaphezulu kokufumana i-bot yokurhweba nge-AI exhaswa ngamaqonga ezentengiso aziwayo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo iintlobo zeasethi onqwenela ukuzithengisa. Emva kwayo yonke loo nto, ngelixa irobhothi ye-AI inokukwazi ukuhlalutya izibini eziphambili ze-forex, isenokungahambelani nesitokhwe sendabuko kunye nezabelo.
Ukuba umphuhlisi injalo ngokwenene bakulungele ukukhulula 'isosi yabo eyimfihlo' kwindawo yentengiso evulekileyo, baya kukuhlawulisa ngeli lungelo. Ngapha koko, ungalindela ababoneleli abarhwebi be-AI ukuba babize imali eninzi ngeenkonzo zabo ukuba banokungqina ukuba i-bot ibisenza inzuzo ngokungaguquguqukiyo.
Ukuba bayakwenza oko, oku kuza njengobhaliso lwenyanga. Kuya kufuneka ugcine uhlawula umrhumo okoko unqwenela ukusebenzisa i-AI yokuthengisa kwi-bot yasendle. Ngokwenyani sikhetha ababoneleli abahlawulisayo inyanga nenyanga- ngokuchaseneyo nomrhumo omcaba omnye, njengoko iqinisekisa ukuba abaphuhlisi benza ulondolozo oluqhubekayo kwisoftware engaphantsi.
Uphengululo loLuntu kunye neZiphumo zoRhwebo ngeMbali
Ke, uyifumene i-AI yokurhweba ngebhot oyithandayo ngenkangeleko- kodwa uyazi njani ukuba iyenzeka kwindawo yentengiso evulekileyo? Inyani yile awuyazi de ibe bot iya kuhlala. Nangona kunjalo, kukho izinto ezimbalwa onokuzenza ukwandisa amathuba akho okuthenga i-bot esemthethweni.
Okokuqala, chitha ixesha uvavanya uphononongo olufumanekayo kwindawo kawonkewonke. Ukuba uza kusebenzisa iqonga lokulinganisa njengeTrustPilot, qiniseka nje ukuba ukulinganisela kusekelwe kumawakawaka abasebenzisi abaqinisekisiweyo. Okwesibini, amaqonga orhwebo athembekileyo e-AI aya kuhlala epapasha iziphumo ezinokuqinisekiswa. Kananjalo, qinisekisa ukuba i-bot ibisebenza kakuhle ngaphezulu kweenyanga ubuncinci- kodwa kungcono, ubuncinci unyaka.
Ababoneleli abaRhwebo abaBalaseleyo be-AI 2021
Ukuba usifundile isikhokelo sethu ukuza kuthi ga ngoku, kuya kufuneka ngoku uqonde ngokuqinileyo ukuba yintoni irobhothi yokurhweba ye-AI kunye nendlela esebenza ngayo, kunye nezibonelelo kunye nomngcipheko wokusebenzisa enye. Ukuba uyasithanda isandi sento ezenzekelayo yesicelo sesoftware kwiimfuno zakho zexesha elide zokurhweba, ngoku siza kudwelisa amaqonga ethu okurhweba nge-AI ye2021.
Qaphela: Olu luhlu lulandelayo lwababoneleli abacetyiswayo lubandakanya urhwebo lwesahlulo se-AI, urhwebo lwentengiso ye-AI, urhwebo lwe-AI, kunye nentengiso ye-AI yedijithali.
1. Izakhono- Elona qonga liyiNtengiso laBokuqala kwabaQalayo
Sikumishini yokudala iqonga lezorhwebo elikhethekileyo elilungiselelwe ukubonelela abathengisi bawo onke amanqanaba, ukusuka kwabaqalayo abangazange bathengise kubuchule obunamaxesha. Sifuna ukwenza iqonga elidibanisa wonke umntu kwiimarike zezemali zehlabathi kwaye libonise amandla alo kubo.
Iqonga lokuthengisa elilelakhelwe abarhwebi kuwo onke amanqanaba, ukusuka kwabaqalayo ukuya kubuchule bamaxesha.
$ 100 ubuncinci idipozithi, akukho ntlawulo ifihliweyo kwaye zonke iintlawulo ziboniswe ngokucacileyo kwimali yeakhawunti yakho.
2. Umrhwebi weCFD-Zizimele ngokwezeMali ngokuThengisa kwi-Intanethi
Ukuba ufunda le nto, oko kuthetha ukuba sisenamabala aseleyo. Oko kuthetha ukuba uyakuba nefoto ekwenzeni ezona zona zikhawulezayo uzokuzibona, kunye nokuqokelela inzuzo ye- € 261, i- € 7,541 kunye nokufikelela kurhwebo lwe- € 67,454 emva korhwebo. Kwaye ungaqala kwangoko nje xa ufaka igama lakho, i-imeyile, ipassword kunye nenombolo yefowuni kwindawo ekhuselekileyo ephezulu kweli phepha.
Kwaye konke kuthatha ubuncinci be- € 250 ukuqala. Ungayikhupha imali yakho eyinkunzi nanini na xa ufuna kuba sele uza kuba neakhawunti yedipozithi esekiweyo!
3. Inzuzo yokufumana inzuzo Yenza i $ 1,500 ukuya kwi-4,200 yeeDola mihla le ngeSoftware yeNtengiso yeHlabathi
Itekhnoloji yethu yorhwebo ekhethekileyo ibeka iliso kwi-crypto kunye neenzuzo zehlabathi 24/7
4. Inkulumbuso yeNzuzo - Zuza ukuya kuthi ga kwi-3,000 yeeDola ngosuku ngokuqala namhlanje
Iiseva zethu zivumela isoftware yethu yokurhweba ukuba ibone utshintsho oluncinci kwiimeko zokurhweba i-3 yezigidi zemizuzwana ngaphambi kokuba abathengisi beWall Street bakhawuleze
Iqela lethu lenkxaso yezobuchwephesha liyakuseta kwaye libeke esweni isoftware yakho yokurhweba ukuze uqalise kwaye likunike ithuba lokuphakama kubo bonke abanye abathengisi kunye nabatyali zimali.Isiseko sethu esikhulu siqinisekisa iimpendulo ezikhawulezileyo kwiimarike nokuba ziphezulu okanye ziphantsi ... ziyaguquguquka .. okanye ukuzola. Isoftware yethu ihlala ihlengahlengisa kwaye ifunda, iqinisa iqonga lethu lokurhweba ukuba ingaze ilahle urhwebo.
Isishwankathelo, ukuba usifundile isikhokelo sethu kuthengiso lwe-AI kuyo yonke indlela, kuya kufuneka uyazi ngokuqonda okuqinisekileyo ukuba isebenza njani le nto. Ngamafutshane, ukusebenzisa i-algorithm eqhutywa yi-AI inikezela ngezibonelelo ezininzi-ezinje ngokuthengisa ngohlobo lwe-24/7, ukufikelela kwiimarike ezininzi, ukuhlalutya iiseti zedatha enkulu, kunye nokuthengisa ngaphandle kwemvakalelo. Ngale nto ithethwayo, kusafuneka wenze ingqwalaselo enzulu malunga nomngcipheko.
Ngokubalulekileyo, akukho siqinisekiso sokuba umboneleli wakho okhethiweyo we-AI ulungele injongo. Ngokuchasene noko, ialgorithm esisiseko ilungile kuphela njengomntu oyiyilileyo. Kananjalo, kuya kufuneka uzibuze ukuba kutheni umphuhlisi eza kuyikhupha imfihlo yabo izicwangciso zorhwebo ukuba ibisenza imali engaka. Ekugqibeleni, qiniseka ukuba uyenza ngokuzimisela okunyanzelekileyo kumnikezeli we-AI wezorhwebo ngaphambi kokwahlukana nemali yakho.
Sijoyine kwaye uqalise ukuba sisityebi ngenkulumbuso!
Ngaba ndifanele ndisebenzise isoftware ye-AI yokurhweba simahla?
Ngelixa kusoloko kusithiwa ezona zinto zibalulekileyo ebomini zisimahla - ngokuqinisekileyo oku akunjalo kwindawo yokuthengisa ye-AI. Ngokuchasene noko, iirobhothi zasimahla zokurhweba nge-AI ziya kuba nomda kakhulu kwizinto ezibonelelayo. Emva kwayo yonke loo nto, kutheni umphuhlisi enokuchitha iiyure ezingabalekiyo esakha ialgorithm yorhwebo, kuphela emva koko ayinike simahla?
Ndazi njani ukuba inkampani yokurhweba nge-AI ithembekile?
Ngamawaka eenkqubo zokurhweba ze-AI ezisebenzayo kwintengiso-uninzi lwazo lubandakanyeka kumabango ehabaxa, ukwahlula ingqolowa kumakhoba akukho lula. Ngale nto ithethwayo, kuya kufuneka usebenze ngokuzimisela kumnikezeli-kwaye okona kubalulekileyo, uzame ukuqinisekisa iziphumo zembali yeerobhothi ze-AI.
Ixabisa malini isoftware ye-AI yokurhweba?
Akukho bungakanani-bungakanani-bonke-impendulo kulo mbuzo, njengoko ixabiso liya kwahluka kumboneleli-ngumboneleli. Ngale nto ithethwayo, uninzi lwamaqonga orhwebo e-AI ahlawulisa umrhumo wenyanga wobulungu.
Ndiyifumana njani irobhothi yam yokurhweba nge-AI ukuba ndilandele iindlela zam zobuqu?
Ukuba uneendlela zakho zokurhweba onqwenela ukuzisebenzisa nge-AI, uninzi lwababoneleli ngoku banikezela ngenkqubo yokutsala kunye nokulahla elungele umsebenzisi. Kananjalo, awudingi ukuba ube namava ekhowudi ngaphambili!
Ngaba ndingayivavanya iarobhothi yam yokurhweba nge-AI ngaphandle kokubeka emngciphekweni imali yam?
Amanye amaqonga abonelela ngendawo yokuvavanywa ngaphakathi endlini. Oku kukuvumela ukuba uvavanye iindlela zakho zokurhweba nge-AI endle, ngaphandle kokubeka emngciphekweni nayiphi na imali.
Zeziphi iiklasi zeeasethi ezinokufikelela kwisoftware yam yokurhweba nge-AI?
Oku kuya kwahluka kumboneleli-ngumboneleli. Ukuba usebenzisa umboneleli we-AI ohambelana neMT4 okanye iMT5, uya kuba nakho ukufikelela kuzo zombini i-forex kunye neeCFD.
Ndiyifumana njani inkqubo ye-AI yorhwebo enezicwangciso ezakhelweyo ngaphakathi?
Ukuba ujonge ukubandakanyeka kurhwebo oluzenzekelayo, kodwa awunazo naziphi na izicwangciso ezizezakho, abanye ababoneleli bayakuvumela ukuba uthenge isoftware esele ipakishwe. Oku kukuvumela ukuba uthenge isicwangciso esihlangabezana neemfuno zakho ngaphandle kokuba namava okuthengisa kwangaphambili.